မြမြလိုဘဝမျိုးရင်ဆိုင်နေရပြီလားလို့ တေးရေးဝေကြီးကို သတိပေးလိုက်တဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်...! - Thadin
HomeCELEBRITYမြမြလိုဘဝမျိုးရင်ဆိုင်နေရပြီလားလို့ တေးရေးဝေကြီးကို သတိပေးလိုက်တဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်…!
မြမြလိုဘဝမျိုးရင်ဆိုင်နေရပြီလားလို့ တေးရေးဝေကြီးကို သတိပေးလိုက်တဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်…!
May 21, 2019 Kay Kay CELEBRITY Comments Off on မြမြလိုဘဝမျိုးရင်ဆိုင်နေရပြီလားလို့ တေးရေးဝေကြီးကို သတိပေးလိုက်တဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်…!
၂၀၁၈ ခုနှစ်အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုပေးပွဲမှာ အကယ်ဒမီဆုရရှိခဲ့တဲ့ မှော်ဝင်သမန်းကျားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ ဖန်တီးရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် ခွန်းဆင့်နေခြည်ကတော့ သီချင်းရေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တေးရေးဝေကြီးကို နာမည်တပ်ပြီး သူမအကောင့်မှာရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ သူမအကောင့်မှာရေးသားထားတာကတော့
16.1.19 က (သူ) အကောင့်နံပါတ်ပေးလို့ သီချင်းတစ်ပုဒ်စာငွေ ၆သိန်းကို မိုဘိုင်း Banking ကနေလွှဲပေးလိုက်တယ် ၂လကြာမယ်ပြောတယ်ကွယ် အိုကေ ရပါတယ်ပေါ့ နာမည်ကြီးပြီးသူရေးသမျှတော်တော်များများ ပေါက်နေတဲ့ တေးရေးဆရာတစ်ယောက်ဆိုတော့ ကိုယ်လည်းသူရေးတာလေးဆိုကြည့်ချင်လို့ နှစ်ပုဒ်အပ်လိုက်တယ်ကွယ် သူကတစ်ပုဒ်အရင်ယူပါနော်တဲ့ အလုပ်တွေကြပ်နေလို့ပါတဲ့ ရပါတယ် ဆိုပြီး သူတောင်းတဲ့ကြာချိန်၂လကိုစောင့်ပေးခဲ့တယ်ကွယ်
၂လကြာပြီးသည့်နောက် ကြားထဲမှာလည်းအကြိမ်ကြိမ် ကတိတွေပျက်တယ်ကွယ် ကိုယ်ကလည်းနားလည်ပေးတတ်သူကြီးဆိုတော့ သူပြောလာတဲ့ complain တွေ ငြီးညူမှုတွေအားလုံးကို ရပါတယ်ဘဲပေါ့နော် သူဖုန်းတခါပျောက်သွားတယ် ပြောတယ်
ဘယ်လိုဆက်ဆက်မရတော့ဘဲအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားလို့ နီးစပ်သူများကိုလှမ်းမေးကြည့်တော့မှ တခြားနီးစပ်သူများမှတဆင့် ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးကြလို့ သူက ကျွန်မကိုအဆက်အသွယ်ပြန်လုပ်လာပေးပြီး နက်ဖြန်ရမယ် တဘက်ခါရမယ်ပြောတယ်ကွယ် နောက် ကျွန်မလည်း over sea သွားခါနီးလို့ ၁၉.၄.၁၉ နေ့က ဖုန်းဆက်မေးကြည့်တော့သူက ပြီးနေပြီ နက်ဖြန် Demo ပေးမယ်နော်အမ ဆိုပြီး ပျောက်ချင်းမလှပျောက်သွားလိုက်တာဒီနေ့ထိပါဘဲကွယ်
ဖုန်းဆက်ကြည့်တော့လည်းဘယ်ချိန်ဆက်ဆက်ပိတ်ထားတယ်ကွယ် ဖုန်းလည်းဆက်မရတော့ဘူးကွယ် စာလည်းပို့မရတော့ဘူးကွယ် FB အကောင့်လည်းသုံးတာမတွေ့ရတော့ဘူးကွယ် ပို့ထားတဲ့စာတွေလည်း မဖတ်ဘူး မပြန်ဘူးကွယ် အဲ့တော့ကျွန်မဘာဆက်လုပ်ရမလဲ အကြံပြုပေးကြပါအုံးကွယ် ပေးလိုက်ရတဲ့ငွေလေးက ၆ သိန်းထဲရယ်ပါ ဆုံးသွားလည်းဘာမှမပြောပလောက်ပါဘူးကွယ်
ဒါပေမဲ့ relationship တစ်ခုကိုထိခိုက်သွားမှာစိုးလို့ ဒီနေ့ထိ သူ့ရဲ့ professional activity တွေကို သီးခံရင်းစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်ကွယ် သူလေးက ကတိမတည်ဘူး professional မဆန်ဘူးကွယ် ကလေးကလားနဲ့ ရပ်ကွက်ဆန်လွန်းတယ်ဘဲပြောရမလားကွယ်
သူစောင့်ခိုင်းတာက၂လစောင့်လိုက်ရတာက ၅ လ နီးပါးရှိပြီ ခုချိန်ထိ ဆက်သွယ်မရ ပျောက်နေတယ်ကွယ် နီးစပ်သူများကိုမေးကြည့်တော့လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်အဆက်အသွယ်မရတာကြာပြီလို့ပြောကြတယ်ကွယ် ဖုန်းလည်းပိတ်ထားတယ်အကျိုးအကြောင်းလည်းမပြောဘူးကွယ် ဆိုတော့ကာ ကိုယ်အပ်ထားတဲ့သီချင်းကို ရချင် လိုချင်တဲ့စိတ်ထက် မင်းအဆင်မှပြေရဲ့လားလို့ တွေးပူမိလာတယ်ကွယ် မင်းနေမကောင်းလို့များလား မင်းအိမ်တွင်းရေးအဆင်မပြေလို့များလား မင်း Stress တွေများပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုများသတ်သေသွားပြီလားကွယ် ဒါမှမဟုတ် မြမြလိုဘဝမျိုးများရင်ဆိုင်နေရပြီလား ပြန်ပေးဆွဲခံထားရပြီလားကွယ်
သွားရင်းလာရင်းတနေရာရာမှာ အသတ်ခံလိုက်ရပြီလားကွယ် အမျိုးမျိုးတွေတွေးပြီး စိတ်ပူနေရပါတယ်လို့ ပျောက်ချင်းမလှပျောက်သွားလေသူ တေးရေး ကိုဝေကြီးကို နီးစပ်ရာအသိမိတ်ဆွေများ တွေ့ရင်ပြောပေးကြပါကွယ် မမခွန်းဆင့် က စိတ်ပူပေးနေပါတယ်လို့ အကျိုးအကြောင်းလေးကို professional ဆန်ဆန်ဖုန်းလေးတစ်ချက်ဆက်ပြီပြောမယ်ဆိုရင်ငွေရောသီချင်းရောမပေးနိုင်တော့လည်းအိုကေပါတယ်လို့ နော် (ဒီပုံစံမျိုးက အကယ်၍-သူသာတခုခုတစ်ကယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူသိနိုင်မှာလည်းနော် စိတ်ပူလွန်းလို့သာ FB မှာ post တင်ပြီးရေးရတာပါ တစ်ကယ်ဆို လုံးဝလုံးဝမရေးချင်ပါဘူးကွယ်)
ဒီစာလေးကိုဖတ်မိသူများ အကယ်၍ တေးရေးဝေကြီးနဲ့နီးစပ်သူများပါမယ်ဆိုရင်တဆင့်ပြောပေးကြပါနော် စိတ်ပူနေပါကြောင်းနဲ့ အကယ်၍များ အသက်နဲ့ခန္ဓာတည်မြဲနေသေးတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ customer / client တစ်ယောက်ကို အခုလို မိမိနှုတ်ထွက်စကားမတည်မြဲတဲ့ဆက်ဆံပုံဆက်ဆံနည်းကြီးကမှားယွင်းနေပါကြောင်းနဲ့ မိမိသည် နာမည်ကြီး professional composer တစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အတွက် ကတိတည်နိုင်အောင်တတ်နိုင်သမျှကြိုးစားသင့်ပါကြောင်း အကြံပြုပေးရင်း သတင်းလေးပါးပေးကြပါနော် •••
အမျှ အမျှ အမျှ သာဓု သာဓု သာဓု ပါတော် •••
Credit-Khun Sint Nay Chi
၂၀၁၈ ခုနှဈအကယျဒမီထူးခြှနျဆုပေးပှဲမှာ အကယျဒမီဆုရရှိခဲ့တဲ့ မှျောဝငျသမနျးကြားရုပျရှငျဇာတျကားကွီးရဲ့ ဖနျတီးရှငျတဈဦးဖွဈသူ သရုပျဆောငျ ခှနျးဆငျ့နခွေညျကတော့ သီခငျြးရေးတာနဲ့ပတျသကျပွီး တေးရေးဝကွေီးကို နာမညျတပျပွီး သူမအကောငျ့မှာရေးသားထားခဲ့ပါတယျ။ သူမအကောငျ့မှာရေးသားထားတာကတော့
16.1.19 က (သူ) အကောငျ့နံပါတျပေးလို့ သီခငျြးတဈပုဒျစာငှေ ၆သိနျးကို မိုဘိုငျး Banking ကနလှေဲပေးလိုကျတယျ ၂လကွာမယျပွောတယျကှယျ အိုကေ ရပါတယျပေါ့ နာမညျကွီးပွီးသူရေးသမြှတျောတျောမြားမြား ပေါကျနတေဲ့ တေးရေးဆရာတဈယောကျဆိုတော့ ကိုယျလညျးသူရေးတာလေးဆိုကွညျ့ခငျြလို့ နှဈပုဒျအပျလိုကျတယျကှယျ သူကတဈပုဒျအရငျယူပါနျောတဲ့ အလုပျတှကွေပျနလေို့ပါတဲ့ ရပါတယျ ဆိုပွီး သူတောငျးတဲ့ကွာခြိနျ၂လကိုစောငျ့ပေးခဲ့တယျကှယျ
၂လကွာပွီးသညျ့နောကျ ကွားထဲမှာလညျးအကွိမျကွိမျ ကတိတှပေကျြတယျကှယျ ကိုယျကလညျးနားလညျပေးတတျသူကွီးဆိုတော့ သူပွောလာတဲ့ complain တှေ ငွီးညူမှုတှအေားလုံးကို ရပါတယျဘဲပေါ့နျော သူဖုနျးတခါပြောကျသှားတယျ ပွောတယျ
ဘယျလိုဆကျဆကျမရတော့ဘဲအဆကျအသှယျပွတျသှားလို့ နီးစပျသူမြားကိုလှမျးမေးကွညျ့တော့မှ တခွားနီးစပျသူမြားမှတဆငျ့ ပွနျလညျဆကျသှယျပေးကွလို့ သူက ကြှနျမကိုအဆကျအသှယျပွနျလုပျလာပေးပွီး နကျဖွနျရမယျ တဘကျခါရမယျပွောတယျကှယျ နောကျ ကြှနျမလညျး over sea သှားခါနီးလို့ ၁၉.၄.၁၉ နကေ့ ဖုနျးဆကျမေးကွညျ့တော့သူက ပွီးနပွေီ နကျဖွနျ Demo ပေးမယျနျောအမ ဆိုပွီး ပြောကျခငျြးမလှပြောကျသှားလိုကျတာဒီနထေိ့ပါဘဲကှယျ
ဖုနျးဆကျကွညျ့တော့လညျးဘယျခြိနျဆကျဆကျပိတျထားတယျကှယျ ဖုနျးလညျးဆကျမရတော့ဘူးကှယျ စာလညျးပို့မရတော့ဘူးကှယျ FB အကောငျ့လညျးသုံးတာမတှရေ့တော့ဘူးကှယျ ပို့ထားတဲ့စာတှလေညျး မဖတျဘူး မပွနျဘူးကှယျ အဲ့တော့ကြှနျမဘာဆကျလုပျရမလဲ အကွံပွုပေးကွပါအုံးကှယျ ပေးလိုကျရတဲ့ငှလေေးက ၆ သိနျးထဲရယျပါ ဆုံးသှားလညျးဘာမှမပွောပလောကျပါဘူးကှယျ
ဒါပမေဲ့ relationship တဈခုကိုထိခိုကျသှားမှာစိုးလို့ ဒီနထေိ့ သူ့ရဲ့ professional activity တှကေို သီးခံရငျးစောငျ့ကွညျ့ခဲ့တယျကှယျ သူလေးက ကတိမတညျဘူး professional မဆနျဘူးကှယျ ကလေးကလားနဲ့ ရပျကှကျဆနျလှနျးတယျဘဲပွောရမလားကှယျ
သူစောငျ့ခိုငျးတာက၂လစောငျ့လိုကျရတာက ၅ လ နီးပါးရှိပွီ ခုခြိနျထိ ဆကျသှယျမရ ပြောကျနတေယျကှယျ နီးစပျသူမြားကိုမေးကွညျ့တော့လညျးသူတို့ကိုယျတိုငျအဆကျအသှယျမရတာကွာပွီလို့ပွောကွတယျကှယျ ဖုနျးလညျးပိတျထားတယျအကြိုးအကွောငျးလညျးမပွောဘူးကှယျ ဆိုတော့ကာ ကိုယျအပျထားတဲ့သီခငျြးကို ရခငျြ လိုခငျြတဲ့စိတျထကျ မငျးအဆငျမှပွရေဲ့လားလို့ တှေးပူမိလာတယျကှယျ မငျးနမေကောငျးလို့မြားလား မငျးအိမျတှငျးရေးအဆငျမပွလေို့မြားလား မငျး Stress တှမြေားပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုမြားသတျသသှေားပွီလားကှယျ ဒါမှမဟုတျ မွမွလိုဘဝမြိုးမြားရငျဆိုငျနရေပွီလား ပွနျပေးဆှဲခံထားရပွီလားကှယျ
သှားရငျးလာရငျးတနရောရာမှာ အသတျခံလိုကျရပွီလားကှယျ အမြိုးမြိုးတှတှေေးပွီး စိတျပူနရေပါတယျလို့ ပြောကျခငျြးမလှပြောကျသှားလသေူ တေးရေး ကိုဝကွေီးကို နီးစပျရာအသိမိတျဆှမြေား တှရေ့ငျပွောပေးကွပါကှယျ မမခှနျးဆငျ့ က စိတျပူပေးနပေါတယျလို့ အကြိုးအကွောငျးလေးကို professional ဆနျဆနျဖုနျးလေးတဈခကျြဆကျပွီပွောမယျဆိုရငျငှရေောသီခငျြးရောမပေးနိုငျတော့လညျးအိုကပေါတယျလို့ နျော (ဒီပုံစံမြိုးက အကယျ၍-သူသာတခုခုတဈကယျဖွဈနတေယျဆိုရငျဘယျသူသိနိုငျမှာလညျးနျော စိတျပူလှနျးလို့သာ FB မှာ post တငျပွီးရေးရတာပါ တဈကယျဆို လုံးဝလုံးဝမရေးခငျြပါဘူးကှယျ)
ဒီစာလေးကိုဖတျမိသူမြား အကယျ၍ တေးရေးဝကွေီးနဲ့နီးစပျသူမြားပါမယျဆိုရငျတဆငျ့ပွောပေးကွပါနျော စိတျပူနပေါကွောငျးနဲ့ အကယျ၍မြား အသကျနဲ့ခန်ဓာတညျမွဲနသေေးတယျဆိုရငျ ကိုယျ့ရဲ့ customer / client တဈယောကျကို အခုလို မိမိနှုတျထှကျစကားမတညျမွဲတဲ့ဆကျဆံပုံဆကျဆံနညျးကွီးကမှားယှငျးနပေါကွောငျးနဲ့ မိမိသညျ နာမညျကွီး professional composer တဈယောကျဖွဈသညျ့အတှကျ ကတိတညျနိုငျအောငျတတျနိုငျသမြှကွိုးစားသငျ့ပါကွောငျး အကွံပွုပေးရငျး သတငျးလေးပါးပေးကွပါနျော •••
အမြှ အမြှ အမြှ သာဓု သာဓု သာဓု ပါတျော •••
ဒီနွေကအပူရှိန်များပြီး မိတ်တွေထွက်ကြလို့ မိတ်ပျောက်တဲ့ဆေးနည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…!
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး (ငြိမ်း) ဦးသိန်းစိန် ဒုလ္လဘရဟန်းခံ…!
This Month : 25164
This Year : 278634
Total Users : 637658
Total views : 2987387